Madaxweynaha Somaliya oo sheegay in Cumar C/rashiid uu ku soo doortay aqoon iyo waayo aragnimo (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Dowladda Federalka Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa khudbad ka jeediyay munaasabad ka dhacday Madaxtooyada Somaliya, ka dib markii uu magacaabay Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Somaliya Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Khudbada Madaxweynaha, ayaa sidaan ahayd “Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan u magacaabo Danjire Cumar Cabdirashid in uu noqdo Ra’iisAl Wasaaraha Jamhuuriyadda Federalka ee Somaliya. Danjire Cumar Cabdirashiid waa qof si fiican loo yaqaan, lagana qaddariyo dhammaan Soomaaliya. Waxa uu lee yahay aqoon iyo waayo aragnimo shaqo, horeyna waxa uu u soo noqday Ra’iisal Wasaare.”
“Inkastoo Dastuurka awood ii siinayo in aan kiligay soo magacaabo Ra’iisal Wasaaraha, hadana go’aankan markaan gaarayay waxaan tixgeliyay aragtida Soomaalida kala duwan oo matalaya bulshada qaybaheeda kala duwan.”
“Ra’iisal Wasaarahu wuxuu kaalin muhiim ah ku leeyahay Soomaaliya, anigu waxaan ahay Madaxweynaha dalka, Ra’iisal Wasaarahuna waa madaxa Dowladda Federalka, wuxuuna masuul ka yahay xaqiijinta hawlaha Dowladda, oo ay ku jiraan dhammaan Wasiirada iyo Wasaaradaha inay fuliyaan hawlahooda waqtiga loogu tala galay, iyada oo aan musuq maasuq lahayn, si hufanna loogu adeegayo danaha dadka Soomaaliyeed.”
“Soomaaliya waa in si dhaqso leh wax uga qabato dhawr arrimood oo taagan oo la xariira amniga, siyaasadda iyo horumarka. Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in la qabto, waqtigana waa yar yahay. Waxaa muhiim ah in si deg deg ah loo fuliyo geeddi socodka qaran dhisidda sida uu qabo Higsiga 2016, sugidda ammaanka iyo in deg deg loo hirgeliyo talaabooyinka horumarka ee ku xusan Heshiiska Higsiga Cusub(The New Deal, Somali Compact).”
“Danjire Cumar Cabdirashid waxaan ku qabaa kalsooni buuxda, waxa kale uu xanbaarsan yahay masuuliyadda dhammaan dadka Soomaaliyeed. Dhamaanteen, ayada oo ay ku jiraan Golaha Wasiirada, waxaan sii adkayn doonaa horumarkii la sameeyay labadii sano ee ugu danbeeysay. Qof kasta oo Soomaaliyeed waa in uu ogaado nabad iyo horumar in aanan lagu gaarin si fudud, balse loo baahan yahay shaqo adag, heelanaan iyo dadaal.”
Tirada lacagta Alshabaab sanadkii tegay zeko ahaan uga uruuriyeen Soomaaliya